China intsimbi wire intambo kunye ifayibha engundoqo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Intambo yefayibha yentsimbi yentsimbi yenziwa sisiseko sefayibha embindini wentambo yocingo lwentsimbi. Imelwe yi-FC.
Xa kuthelekiswa nentambo yesinyithi yentsimbi, intambo yentsimbi yocingo lwentsimbi ineempawu zokuthamba, ukumelana nokubola kunye nokugcinwa kweoyile ngakumbi.
Kukho iintlobo ezimbini zefibre engundoqo: isiseko sefayibha yendalo kunye nesiseko sokwenziwa kwesiseko.
Iintsambo zentsimbi zentsimbi ezisebenzisa intsimbi zisebenzisa ii-cores zentsontelo ezinje ngejute, sisal, njl.
Intambo yentsimbi yocingo lwentsimbi sisiseko sefayibha esenziwe ngezinto zokwenziwa kweekhemikhali, ezinje nge-polyethylene, i-polypropylene, i-nylon, njl.
Uyintoni umahluko phakathi kwesiseko sentsimbi kunye nesiseko sefayibha
1. Intambo yentsimbi yocingo lwentambo enobubanzi obulinganayo inamandla amakhulu okuqhekeka kunentambo yocingo olusisiseko, kunye nomthwalo ewuthwalayo mkhulu;
2. Intambo yentsimbi yocingo lwentambo inokuchasana okungcono kunye noxinzelelo koxinzelelo kunentambo yefayibha yengcingo. Intambo yocingo yentsimbi ilungele ukujikeleza okungaphezulu;
3. Intambo yentsimbi yocingo lwentambo iphezulu kunefayibha yentambo yocingo ngokubhekisele kubushushu obuphezulu. Intambo yocingo yentsimbi yentsimbi ngokubanzi ikhethelwa amaxesha obushushu aphezulu;
4. Intambo yefayibha yocingo yocingo ithambile kunentambo yesinyithi yocingo;
5. Ukuthanjiswa kwentambo yentsimbi yentsimbi kulunge ngakumbi kunentambo yocingo lwentsimbi-yokugcina intsimbi.
Igama Intambo yocingo yentsimbi kunye neFiber Core
Ububanzi 0.3-12mm, njl
Ulwakhiwo 6 * 7 + FC, 6 * 19 + FC, njl.
Ubude 500 mm / reel, 1000 mm / reel, 2000 mm / reel, okanye ngokweemfuno zakho
Izinto eziphathekayo Isinyithi seCarbon, isiseko se-hemp / ikotoni / isiseko se-PP
Unyango oluphezulu Electro-galvanizing, okanye hot-dip galvanizing
Ulwakhiwo Ububanzi begama Igama T / S. Ubuncinci B / L. Indawo yokudlula Ubunzima obumiselweyo
Okulandelayo: Intambo yentsimbi yentsimbi kwalenza intsimbi
Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, Camera Camera Intambo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo,